INokia 4.2 iya kuziswa kule veki eIndiya | I-Androidsis
INokia 4.2 iza kuphehlelelwa kule veki eIndiya
AbakwaNokia sele besishiyile neefowuni ezininzi kulo nyaka. Kwi-MWC 2019 uphawu lusishiye noluhlu olutsha lweefowuni. Nangona ngaphezulu kweenyanga sikwazile ukudibana neefowuni ezintsha kwinxalenye yabo. Ngekhe silinde ixesha elide kude kube yimodeli entsha esemthethweni. Njengoko kule veki iNokia 4.2 izakwaziswa ngokusesikweni eIndiya.
Kwezi veki bekukho amarhe ambalwa malunga nale fowuni. Kodwa ngomso ngoMeyi 7 ngumhla apho le Nokia 4.2 iyakwenza ukungena kwayo kwintengiso eIndiya. Asazi ukuba iya kuba nentetho okanye iya kuthengiswa ngokulula. Kodwa sele sineenkcukacha malunga nefowuni.
Le modeli ifikelela kwinqanaba eliphakathi kwinqanaba eliphakathi lophawu. Icandelo apho bengakhange basebenze kangako. Ukusukela ukuba ezi nyanga zijolise kwimizamo ephezulu, kunye ne-9 PureView okanye kuluhlu oluphakathi, apho silindele ezinye iimodeli kule ntwasahlobo. Le Nokia 4.2 iya kuba yimodeli ethozamileyo.
Kulindeleke ukuba ifike ngescreen se-intshi eyi-5,71 ubukhulu, nge-19: 9 ratio. Ke sinokulindela inotshi kuyo. Ngaphakathi iprosesa ye-Snapdragon 439, ihamba ne-2GB ye-RAM kunye ne-16GB yokugcina kuguqulelo olunye. Kuba kuyakubakho enye nge-3/32 GB njengoko kuye kwazeka ukwazi. Kwakhona, ibhetri yefowuni iya kuba ngumthamo we-3.000 mAh.
Le Nokia 4.2 kulindeleke ukuba ifike ngekhamera ngasemva ezimbini, Njengoko kubonwe kumfanekiso. Kwimeko yakho, iya kuba lilungu le-13 + 2 MP. Ngaphambili kuya kusetyenziswa inzwa enye ye-8 MP. Phakathi kwezinye iinkcukacha zefowuni, kuthiwa iya kuba siselfowuni yeSIM. Ukongeza ekubeni nePie ye-Android (Android One) njengenkqubo yokusebenza ngokwendalo.
Ngokubanzi, inikwa njengemodeli eyamkelekileyo kuluhlu lwayo. Asinayo idatha kwixabiso lale Nokia 4.2. Nangona akufuneki ibize kakhulu, ngakumbi kuba isungulwe eIndiya njengemakethi yokuqala. Siyathemba ukwazi okungakumbi kwezi ntsuku, nangokuphehlelelwa kwayo eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia 4.2 iza kuphehlelelwa kule veki eIndiya
IHuawei isebenza kumacwecwe amatsha anekhamera ye-48 MP
I-Huawei Y9 Prime 2019: ifowuni elandelayo evela kwinkampani enekhamera ye-selfie yekhamera kunye nekhamera engasemva kathathu